အလွန်အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်း – WunYan
ဂုဏ်တော်9ပါးကို ပုတီး (10) ပတ်ရအောင်ခွဲ၍ စိပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့်နေ့သားသမီးမဆို တနင်္ဂနွေနေ့ ည9နာရီမှည 12 နာရီအတွင်း အဆင်ပြေချိန်တွင် စိပ်ပါ။
နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ထိ (8) ည တိတိ ညစဉ် စိပ်ပါ။ နေ့စဉ် 10 ပတ် စိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စိပ်ရမယ့် အချိန်အတူတူပါဘဲ။
ဘုရားရှင်အား သောက်တော်ရေချမ်းများ ဖယောင်းတိုင် အမွှေးတိုင်များပူဇော်၍စိပ်ပါ။သတိပြုရန်မှာပုတီးစိပ်နေသော 8 ရက်အတွင်းတွင် မိမိအလိုချင်ဆုံးအဖြစ်ချင်ဆုံး ဆုတစ်ခုသာတောင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ပုတီးစိပ်နည်းကို အလုပ်ရှာနေသော ညီမငယ်တစ်ဦးအား စိပ်စေရာ တစ်လအတွင်း ခန့်မှန်းထားသည်ထက် လစာပိုကောင်းသော အလုပ်ရသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ၍ မိဘအိမ်ပြန်နေသူ ညီမငယ်တစ်ဦးက. ပုတီးစိပ်ပြီး ရက် 20 အကြာတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ မိဘများအားတောင်းပန်၍ လိုက်လံခေါ်ဆောင်ကြောင်း သိရပါသည်။ လူမှုရေး/ စီးပွားရေး/ ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး/ အချစ်ရေး/ အိမ်ထောင်ရေး မည်သည့် ကိစ္စရပ်မဆို အဆင်ပြေရန် စိပ်နိုင်ပါသည်။ (108) လုံး ပုတီးဖြင့်သာစိပ်ပါ။
မှတ်ချက် – ဂုဏ်တော် (10) ပါး မဟုတ်ပါ။ ဂုဏ်တော် (9) ပါးကို ပုတီး 10ပတ်ရအောင် စိပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Credit : ဗေဒင်မေးကြမယ်
ဂုဏျတျော9ပါးကို ပုတီး (10) ပတျရအောငျခှဲ၍ စိပျနညျး ဖွဈပါတယျ။မညျသညျ့နသေ့ားသမီးမဆို တနင်ျဂနှနေေ့ ည9နာရီမှည 12 နာရီအတှငျး အဆငျပွခြေိနျတှငျ စိပျပါ။
နောကျတဈပတျ တနင်ျဂနှနေထေိ့ (8) ည တိတိ ညစဉျ စိပျပါ။ နစေ့ဉျ 10 ပတျ စိပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။စိပျရမယျ့ အခြိနျအတူတူပါဘဲ။
ဘုရားရှငျအား သောကျတျောရခေမျြးမြား ဖယောငျးတိုငျ အမှေးတိုငျမြားပူဇျော၍စိပျပါ။သတိပွုရနျမှာပုတီးစိပျနသေော 8 ရကျအတှငျးတှငျ မိမိအလိုခငျြဆုံးအဖွဈခငျြဆုံး ဆုတဈခုသာတောငျးရနျ ဖွဈပါသညျ။ ဤ ပုတီးစိပျနညျးကို အလုပျရှာနသေော ညီမငယျတဈဦးအား စိပျစရော တဈလအတှငျး ခနျ့မှနျးထားသညျထကျ လစာပိုကောငျးသော အလုပျရသှားသညျကို တှရေ့ပါသညျ။
အိမျထောငျရေး အဆငျမပွေ၍ မိဘအိမျပွနျနသေူ ညီမငယျတဈဦးက. ပုတီးစိပျပွီး ရကျ 20 အကွာတှငျ ခငျပှနျးဖွဈသူမှ မိဘမြားအားတောငျးပနျ၍ လိုကျလံချေါဆောငျကွောငျး သိရပါသညျ။ လူမှုရေး/ စီးပှားရေး/ ပညာရေး/ ကနျြးမာရေး/ အခဈြရေး/ အိမျထောငျရေး မညျသညျ့ ကိစ်စရပျမဆို အဆငျပွရေနျ စိပျနိုငျပါသညျ။ (108) လုံး ပုတီးဖွငျ့သာစိပျပါ။
မှတျခကျြ – ဂုဏျတျော (10) ပါး မဟုတျပါ။ ဂုဏျတျော (9) ပါးကို ပုတီး 10ပတျရအောငျ စိပျခွငျးဖွဈပါတယျ။
Credit : ဗဒေငျမေးကွမယျ